snepal – Page 20 – Fursad Nepal
सृष्टिको मायामा सनम
Featured, Nepali Music News, Nepali Music Videos Comments Off on सृष्टिको मायामा सनम
गायक केबी पुनको स्वर रहेको कति मायाको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यस गीतमा राजकुमार बगरको शब्द र संगीत छ ।लोकप्रिय एंव चर्चित मोडल सनम कठायत र पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा जम्दै गरेकी मोडल सृष्टि खड्काको अभिनय रहेको यस भिडियोमा दुई प्रेमिको मायालाई देखाइएको छ । जनक सिंहको निर्देशन रहेको भिडियोलाई उत्सव दाहालको छायांकन रहेको छ भने टेकेन्द्र शाहको …
किन गरियाे नेपाल आइडल विरुद्ध मुद्धा दायर ?
Featured, Nepali Music News Comments Off on किन गरियाे नेपाल आइडल विरुद्ध मुद्धा दायर ?
अहिले निकै चर्चामा रहेकाे एपी वान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’ विरुद्ध मुद्धा दायर भएको छ । साेमबार काठमाडाैं जिल्ला अदालतमा नेपाल अाइडल बिरूद्द मुद्दा दायर भएकाे छ।करार ऐन २०५६ को दफा ८७ को देहाय १ र २ मा टेकेर आइडल विरुद्ध अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले मुद्धा दायर गरेका हुन् । अदालतले सो मुद्धाको पेशी बुधबारलाई तोकेको छ ।गत शुक्रबार आइडलका निर्णायकहरुले विशेषाधिकार प्रयोग …
यस्तो छ ऐश्वर्यको पोष्टर
Featured, Nepali Movie News, फुर्सद फिल्मी Comments Off on यस्तो छ ऐश्वर्यको पोष्टर
पछिल्लो समय फिल्म ऐश्वर्य सार्वजनिक गीत ‘तिमि रोएको पल’ का कारण चर्चामा छ । सुगम पोखरेल र अन्जु पन्तले गाएको यस गीतमा संगीत अर्जुन पोखरेलले दिएका छन् । पछिल्लो समय एकपछी अर्को गीत मार्फत सफलता पाउदा गएका अर्जुनलाई यसले पनि सफलता दिदैछ । गीतले चर्चा पाउदै गर्दा निर्माण टीमले टिजर पनि सार्वजनिक गरेको छ , जसलाई प्रसंसा मिलेको छ । …
यस्तो छ दुनियाँलाई हँसाउने चार्लीको जीवन कथा
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on यस्तो छ दुनियाँलाई हँसाउने चार्लीको जीवन कथा
फिल्मी दुनियाँमा चार्ली एक अमर नाम हो । धेरैका आदर्श कलाकार चार्ली चाप्लिन अप्रिल १६ सन् १८८९ मा लण्डनमा जन्मिएका हुन् । चालीर्को बाल्यकाल निकै अप्ठ्यारोसँग वितेको थियो । उनको बाल्यकाल निकै गरिबी र अभावले भरिएको थियो । जँड्याहा बुवाका कारण चार्लीकी आमा पागल बनेकी थिइन् । जसका कारण चार्ली सात वर्षको उमेरमा आश्रम जानु परेको थियो । १९४० मा …
प्रियंकाको यस्तो त्याग कस्को लागी ?
Bollywood / Hollywood, Featured Comments Off on प्रियंकाको यस्तो त्याग कस्को लागी ?
बलिउड अभिनेता आमीर खान र प्रियंका चोपडा पहिलो पटक एस्ट्रोनट राकेश शर्माको बायोपिकमा सँगै काम गर्ने भएका छन् । भारतीय मिडियाका अनुसार प्रियंकाले सञ्जय लिला भन्सालीको फिल्ममा समय अभाव भएको भन्दै काम गर्न अस्वीकार गरेकी छन् । सञ्जय लिला भन्सालीसँग राम्रो सम्बन्ध भएपनि फिल्म खेल्न अस्वीकार गरेपछि माया नगरीमा अनेक अड्कलबाजी सुरुभएको छ । यसअघि पनि प्रियंकाले एक बायोपिक खेल्न …